Advance Level Logistics & Supply Chain Management
Advance Logistics & Supply Chain Management
Advance Level Logistics and Supply Chain Management
💢Logistics planning သည် Supply chain တစ်ခုလုံးကို ဆက်သွယ်ပေးပြီး ပုံသေအစီအစဉ် တစ်ခုအနေဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ အင်အားကြီးတဲ့ supply chain ချိတ်ဆက် မှုများအတွက် အခြေခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။
💢Logistics management အနေဖြင့် ပုံသေဖြစ်ပြီး အစဉ်မပြတ် ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်သူတွေမှ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို. သေချာအောင် ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို.သို.ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်က Planning ကောင်းကောင်းလိုအပ်ပြီး ထို planning က logistics management ရဲ. အရေးအပါဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုအခြေ အနေတွေမှာ ပိုပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကုန်တွေအတွက် သိမ်းဆည်းဖို. warehouse တွေလိုအပ်ပါတယ်။
💢Material Handing က ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် မှန်းဆခြင်း forecasting, အရင်းအမြစ်များ သတ်မှတ်ခြင်း resource allocation, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ကြိုတင်စီမံခြင်း၊ production planning ,inventory reduction လက်ကျန်ကုန် လျော့ချခြင်း၊ customer delivery ဖောက်သည်တွေဆီ ကုန်ပို.ဆောင်ခြင်း နှင့် ထောက်ပံ့ခြင်းတို.တွင် အကူအညီဖြစ်စေပါသည်။
💢Logistics management သည် အဆင့်တိုင်းတွင် သင့်လျော်သော ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ခြင်းတို.ပါဝင်ပြီး သင့်လျော်တဲ့ proper logistics planning မရှိပဲ ကောင်းစွာ မစီမံနိုင်ပါ။
✅ သင်ဟာ Logistic and Supply Chain Management အကြောင်း ကောင်းစွာ နားလည်ချင်သူ သိုမဟုတ် စနစ်တကျဖြင့် warehousing ပိုင်း Transportation ပိုင်းကို စီမံခန့်ခွဲလိုသူ တစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ဒီ Advance Level Logistic and Supply Chain Management အတန်းကို တက်ရောက်ဖို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
✅ နောက်တစ်ချက်က ဒီအတန်းမှာ ပိုမိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင် ရမည့် Project တွေ Case Study Assignment တွေ လုပ် ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမှန်တကယ် အချိန်ပေးတက် ရောက်နိုင်သူ ဖြစ်ဖို လိုအပ်ပါတယ်။
✅ Diploma သင်တန်းများ တက်ရောက်ရန် အချိန်မပေးနိုင်လူများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရာ၌ လိုအပ်သည်များကို သိလိုသူများကို စာတွေ့ လက်တွေ့ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✅Advance Level အတန်းအတိုင်းအတွက် လူဦးရေကန့်သတ်ထားကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးပါရစေ။
Chapter 1: Supply Chain Management Principal
Chapter 2: The Evolution of Logistics
Chapter 3: Supply Chain Planning and Control
Chapter 4: Managing Lead Time Frontier
Chapter 5: Transportation and Distribution Network
Chapter 6: Warehouse Management
Chapter 7: Logistics Business Strategies
Chapter 8: Global Logistics Practices
Teacher: Daw Khine Lay